Nioty Varimbazaha Tamin’ny Sabata Izy Ireo | Fiainan’i Jesosy
Nioty Varimbazaha Tamin’ny Sabata Izy Ireo
MATIO 12:1-8 MARKA 2:23-28 LIOKA 6:1-5
NIOTY VARIMBAZAHA TAMIN’NY SABATA IREO MPIANATRA
I JESOSY NO “TOMPON’NY SABATA”
Nianavaratra ho any Galilia i Jesosy sy ny mpianany. Lohataona tamin’izay ary efa nisy vary ny salohim-bary teny an-tsaha. Noana ny mpianatra ka nioty salohim-barimbazaha ary nihinana. Sabata anefa ny andro, ka nandinika azy ireo ny Fariseo.
Tadidinao ve fa nisy Jiosy niampanga an’i Jesosy ho nandika ny Sabata tao Jerosalema, ka te hamono azy? Ny nataon’ny mpianany indray izao no niampangan’ny Fariseo azy. Hoy izy ireo: “Jereo fa manao izay tsy azo atao amin’ny sabata ny mpianatrao.”—Matio 12:2.
Nilaza ny Fariseo fa toy ny mijinja sy mively vary ihany ny mioty varimbazaha sy mikosoka azy amin’ny tanana mba hohanina. (Eksodosy 34:21) Hentitra loatra ny fiheveran’izy ireo ny atao hoe miasa, ka lasa nampahory ny nitandrina ny Sabata. Tokony ho fotoana nampahery sy nahafaly anefa izy io. Nahitsin’i Jesosy ny hevi-dison’izy ireo. Nilaza ohatra vitsivitsy izy mba hampisehoana fa tsy tian’Andriamanitra hampiharina amin’ny fomba hentitra toy izany ny lalàny momba ny Sabata.
Notantarain’i Jesosy, ohatra, fa noana i Davida sy ny namany indray mandeha, ka nankao amin’ny tranolay masina ary nihinana ny mofo aseho. Natokana hohanin’ny mpisorona ireo mofo ireo, izay efa nesorina teo anatrehan’i Jehovah ary nosoloana vaovao. Tsy meloka anefa i Davida sy ny namany tamin’io, na dia nihinana an’ireo mofo aza.—Levitikosy 24:5-9; 1 Samoela 21:1-6.
Hoy koa i Jesosy: “Sa, mbola tsy novakinareo tao amin’ny Lalàna fa miasa amin’ny andro sabata ny mpisorona ao amin’ny tempoly nefa tsy meloka?” Te hilaza izy fa namono biby hatao fanatitra sy niasa tao amin’ny tempoly ny mpisorona, na tamin’ny Sabata aza. Hoy izy avy eo: “Lazaiko aminareo anefa fa misy lehibe noho ny tempoly eto.”—Matio 12:5, 6; Nomery 28:9.
Nampiasa ny Soratra Masina i Jesosy avy eo mba hanamafisana ny heviny. Hoy izy: “Raha mba azonareo mantsy ny hevitry ny hoe: ‘Famindram-po no sitrako fa tsy sorona’, dia tsy ho nomelohinareo izay tsy meloka.” Namarana ny teniny izy hoe: “Fa Tompon’ny sabata ny Zanak’olona.” Ny Fanjakany Arivo Taona izay hitondra fiadanana no tao an-tsainy tamin’izay.—Matio 12:7, 8; Hosea 6:6.
Efa ela ny olombelona no nijaly satria nandevozin’i Satana. Miely hatraiza hatraiza ny ady sy herisetra. Tena mila fiadanana àry isika ary miandrandra mafy an’izany. Hanjaka izany mandritra an’ilay Sabata lehibe amin’ny fitondran’i Kristy.
Inona no niampangan’ny Fariseo an’ireo mpianatr’i Jesosy, ary nahoana?
Inona no nataon’i Jesosy mba hanitsiana an’ireo Fariseo?
Nahoana i Jesosy no lazaina fa “Tompon’ny sabata”?
Hizara Hizara Nioty Varimbazaha Tamin’ny Sabata Izy Ireo